Nin labaad oo lagu tuhunsanaa dhacdadii Stockholm oo la daayay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nin labaad oo lagu tuhunsanaa dhacdadii Stockholm oo la daayay
La daabacay tisdag 11 april 2017 kl 12.28
Maxkamadda degmada Stockholm oo ay ka dhacday dacwaddii Akilov. sawir: Jonas EkstrÃ¶mer/TT
Hayadda xeer-ilaalinta ayaa oodda ka qaaday shakhsigii labaad ee lagu tuhun-sanaa inuu gacan ku lahaa falkii argagixis-nimo ee jimcadii ina dhaaftay ka dhacay magaalada Stockholm, sida ay hayaddu war saxaafadeed ku baahisay.
Xeer-ilaaliyaha ayaa dib uga laabtay xukunkii ruumka ee axaddii ina dhaaftay lagu xukumay shakhsigaasi, iyadoona lagu tuhun-sanaa inuu gacan ku lahaa falkii argagixisada ee dilka sababay.
Go’aankan ayaa ka dambeeyay kolkii uu qareenkii Rakhmat Akilov maxkamadda ka sheegay inuu macmiilkiisu qirtay inuu ka dambeeyay falkii argagixis-nimo ee jimcadii ka dhacay magaalada Stockholm dabadeedna lagu xukumey ruumka.
Xeer-ilaaliyaha ayaa sheegy inuu hoos u dhacay tuhunkii laga qabay eedeeysanaha sidaa-daraadeed aanay jirin sabab ruumka loogu sii hayo. Sidaasi oo ay tahay ayaan ninkaasi xabsiga laga sii deeyn doonin maadaama horay looga gaaray go’aan ah in dalka laga tarxiilo.
Eedeeysane Akilov oo maxkamad ku xukuntay in ruumka lagu hayo
tisdag 11 april 2017 kl 11.35